Visitor from US is reading गधाले खच्चडलाई बलात्कार गरेपछि जातिय दंगा
Visitor from US is reading Room in Hartford, CT
Visitor from RU is reading लोग्नेमान्छे मात्र किन माथि ?
Visitor from RU is reading Classifieds Summary: Jobs in MA, Room/Apt in CA,MA,NY
Visitor from US is reading Models n water
Posted on 06-03-12 5:34 PM Reply [Subscribe]
Nepali site ma ke ke matra dekhne paune
गधाले खच्चडलाई बलात्कार गर्यो भने के होला ? तपाइँको उत्तर हुनसक्छ, जनावरको यस्तो कृत्यले मान्छेलाई फरक पार्ने कुरै भएन, अर्थात् कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् । तर सधै यस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र ? यमनमा गधाले खच्चडलाई बलात्कार गर्दा १५ जना मानिसको ज्यान गएको छ ।
समाचार पढ्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर कुरो सत्य हो । यमनको एक आदिवासी इलाकामा गधाले खच्चडलाई रेप गरेको घटनापछि गोली चल्दा १५ जनाको ज्यान गएको छ । स्थानीय एक व्यक्तिको गधाले अर्को व्यक्तिको घरमा पालेको खच्चडलाई लखेटी लखेटी बलात्कार गरेपछि यो घटना भएको हो । छिमेकीको गधाले आफ्नो खच्चडलाई बलात्कार गरेको घटनापछि निकै क्रुद्ध बनेका खच्चडका मालिकले गधा मालिकसँग झगडा गर्न पुगे । झगडाले निकै ठूलो रुप लियो । दुइ पक्षबीच गोली हानाहान समेत भयो । गोली हानाहानको क्रममा १५ जना स्थानीय बासिन्दाको ज्यान गयो ।
वास्तवमा गधाले खच्चडमाथि बलात्कार गरेको घटनाले त्यहाँ जातिय दंगाको रुप लिएको थियो । गधाका मालिक मकाबी समुदायका थिए भने खच्चडका मालिक अब्बास समुदायका थिए । स्थानीय दुइ समुदायका मानिसले दुइ जनावरको यो घटनालाई पछि जातिय रुप दिएर र भिड्न थाले । हिंसाले ठूलै जातिय दंगाको रुप लिन थालेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको थियो । दक्षिण पश्चिमी अब प्रान्तमा घटेको यो घटनाका क्रममा प्रहरीले ८ जनालाई पक्रेको छ । गधा र खच्चडको अवस्था भने सामान्य छ ।